Symbology uye psychoanalysis muPoe Kupunzika kweImba yaUsher | Zvazvino Zvinyorwa
Kuwa kweImba yaUsher nderimwe remabasa anozivikanwa e Edgar Allan Poe uye nguva nenguva uye ini ndinofanira kudzokera kuna Bostonia tenzi wekutya. Muchikamu chino ini ndinopora chikamu cheimwe yeaya basa rekoreji kuti muzuva rayo ndaifanira kushanda. Ino inguva chidimbu kubva kune yakareba rondedzero pamusoro pekufananidzira uye psychoanalysis yebasa. Imwezve yekuda kuziva uye mudiki mupiro kune chimiro cheiye mukuru Poe.
2 Imba yaUsher
3 Hama dzaUsher
4 Nyanzvi yezvepfungwa
4.1 Chikamu chebhaibheri chakashandiswa ipapo:
Mumunhu wekutanga, munyori anorondedzera kushanya kwake kushamwari yehudiki, Roderick usher, muridzi weimba inoshamisa zvisinganzwisisike. Murume uyu ari kurwara uye anokuudza kuti huya umufadze. Anogara nasisi vake Mukadzi madeline, iri zvakare kurwara zvakanyanya uye saka anonzwa kusuruvara kukuru.
Munyori anodarika mwaka neshamwari yake achizvipira kutaura, kuverenga nekuteerera kumimhanzi. Asi rimwe zuva Lady Madeline anofa, Kana, zvirinani, zvinoita. Vachamusiya mubhokisi, mune imwe imba muzasi meimba.
Kubva ipapo Roderick Usher zvishoma nezvishoma anorasikirwa nemusoro wake uye kurwara nekurwara kusvika husiku humwe hwemhepo ine dutu anotanga kugumbuka zvikuru paanofunga iye kuchema imba yese. Kuti amusimbise, murondedzeri anotanga kuverenga bhuku kusvikira anzwawo ruzha irworwo, sekuchema nekuchema. Roderick Usher, atopenga, anoziva izvozvo vakamuviga ari mupenyu Ndipo ipapo Lady Madeline zvinoratidzika kwavari, chokwadi chinokurumidza kufa kwemukoma wake. Izvo zvisati zvaitika uye iyo imba yava kuda kuparara murondedzeri anotiza achisiya kumashure kwe matongo kunyura mudziva renharaunda yakatenderedza.
Izvo zvinodikanwa kusimbisa iyo rakakosha basa reimba, nekuti pesvedzero yayo pavatambi uye zvinopesana inoenderana. Zvakare iyo simba risingaiti izvo zvinokonzeresa iko kukanganisa uye izvo zvinotungamira kurufu rweva protagonists vaviri uye nekuparadzwa kwechivakwa. Simba iri rinokurumidza kuwanikwa pakutanga kwenyaya panotsanangurwa nemunyori kusvika kwake uye kunzwa kwekusuwa nekusuwa iyo inoburitsa chiratidzo cheimba huru.
Ehezve, pamurangariro uyu wekutanga, rufu rwakafanotaurwa nekuti kana iwe uri kutarisa imba nezvakapoteredzwa, zvakaita sedziva nemiti yakaoma, unogona kungozvitora chimwe chinhu chiri kumagumo ekupokana kwayo nenguva, kungofanana neyevagari vayo, vaviri vekupedzisira Usher. NdiMai Madeline, vakavigwa vari vapenyu nguva yavo isati yasvika, vanokonzeresa kuputswa kweimba, nguva yavo isati yasvika, uye nerufu rwehama yavo, kunyudza zvese mudziva, sekungopera kwenyaya.
Nekudaro, chii chaizvo chinogadzirisa zvinhu izvi, sevanhu vazhinji semamiriro uye nharaunda, iri kuwedzerwa kwenzvimbo yepfungwa, yepfungwa dzaPoe. Izvi zvinogona kuonekwa mukufananidzira kwevamwe vavo, senge, semuenzaniso, iyo imba. Imba iyo nekuda kwehunhu hwayo inoratidza nemuviri wemunhu uye kufunga.
Saka, iyo facade zvingareva iyo chiso, iyo mask iri pasi pehunhu hwemunhu. Izvo zvakasiyana pasi zvinogona kunge zviri zviratidzo zve kuomarara uye nzvimbo. ari soro sirin'i uye uriri yaizoenderana neiyo musoro nekufungandiko kuti, kune anoziva uye anotungamira mabasa. Pane kupokana, iyo bhesimendi kana dura zvaizoratidza el asingazive uye zvisikwa. La ladder angave ari nzira dzekubatana kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzepfungwa uye chirevo chayo chakakosha chinoenderana nekuti chinotariswa munzira yekukwira kana kudzika.
Izvo zviri pachena ndezvekuti pane zvakaenzana pakati peimba nemuviri wemunhu, kunyanya mu kuvhurika. Humbowo hweiyi ndiyo iyo mashoko yemunyori kana ari pamberi peimba yeUsher, achitsanangura mahwindo erima aanoona 'se maziso matema kumeso kusina chinhu".
Izvi zvinoitikawo nedziva kana matongo. Dziva rinogona kuratidza zvakavanzika uye zvisinganzwisisike. Kunze kwezvo, iyo pamusoro pemvura yaro inogona kufananidzira a mirara, mufananidzo weicho chaicho, chokwadi chinonyura mukati memvura imwechete uye chinosiya chete matongo. Ivo vanogona zvakare kureva avo manzwiro kana akararama zviitiko zvisisina hukama hwakakosha asi izvo zvinoramba zviripo kunyangwe isina basa kana basa maringe nekurarama kana kufunga.
Mukuenderana nevatambi uye chinzvimbo chinotorwa nemunyori semunyori, izvi haapindiri zvine hungwaru mune nyaya kana mune ramangwana revaporofita. Zvinotaridza kuti Poe akadurura kumwe kuomarara kwake kuisanganisira kana, panzvimbo pezvo kuchiratidza, muna Roderick naMadeline, kunyanya mune yekare.
Chaizvoizvo chave chiri kufukunurwa uye chimwe chikamu chakasiiwa kunze, semucherechedzi. Chirwere chaRoderick uye kuora mwoyo ndezvePoe kuti, kumutenda kana kuburikidza nemaziso ake, vanogona kuenda kunze, vazvisunungure uye vorega kuve mutoro kumunyori.
Lady Madeline aizoita kushaya mweya wake. Chingavewo chimiro chaamai vake izvo zvinoonekwa uye zvinonyangarika kuburikidza nemakoridhi eimba, kubva mupfungwa dzaPoe, mukuyedza kudzoka kuhupenyu pasina kubudirira. Dzese shanduko dzemutinhimira wenyaya dzaizowira pana Lady Madeline kana kutsvaga kweakarasika mai
Asi kune zvekare kutiza kuyedza, yeruponeso kubva mukuparadzwa uye kufa sekuratidzwa kunoitwa nemunyori kumagumo. Uye icho icho icho chinonzwisisika, kufunga uye chakanangana chikamu icho chaakaona kubva kunze chinoratidzika kunge chinoramba iro ramangwana raari kunanga pachokwadi. Izvi zvinoratidza mutsetse wakamanikana wakapatsanura pfungwa kubva kupenga muhupenyu hwaPoe uye kuti pakupedzisira zvakadzimwa nekupindwa muropa kwake nedoro.
Izvo zvinogona zvakare kunzi Poe ndiye mumwe wekutanga kuyedza kuita methodological kuferefeta kwekusaziva pfungwa. Iyi imba yeUsher, iine makamuri ayo erima, nzvimbo dzayo dzakaomarara kana iyo inotsemuka pakati pechiso chayo, yaonekwa seye pre-Freudian modhi yeiyo pfungwa isingazive.
Kana munguva dzazvino iyo psychoanalytic nzira kubasa kwaPoe, ivo vaida kuwana kudzikira kweyekunyora mhando dzenyaya dzake. Asi panguva imwecheteyo, vatsoropodzi vanoramba vachidzidza basa rake vanoramba vachimutora se piyona mune aesthetics, muongorori wepfungwa dzevanhu uye nyanzvi yekunyora.
Chero zvazviri izvo zvinoonekwa ndezvekuti nyaya dzavo dzinoramba dziri mundangariro sa muenzaniso wekutsvaga chakavanzika uye kutarisira kwekutya kunoitwa nevanhu.
Chikamu chebhaibheri chakashandiswa ipapo:
E. Cirlot, Zviratidzo Duramazwi, Basa, Barcelona, ​​1988.
Iyo Norton Anthology yeAmerican Zvinyorwa, New York, 1989.
Iyo Isingazive Poe, anthology yezvakatiza zvinyorwa neEE Poe, Guta Remwenje Mabhuku, San Francisco, 1980.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Symbology uye psychoanalysis muPoe Kupunzika kweImba yaUsher
Mhoroi, ndinofanira kuita basa pane iri basa uye pane mibvunzo miviri yandisingakwanise kupindura. Izvi ndeizvi: Usher arikuda kuti shamwari yake aonei? Uye ndinofanira kuona zvinhu zvine rudo zvinovapembedza nezvakanyorwa ... ndinotenda chaizvo kana uchikwanisa kundibatsira!
Maria Florence akadaro
mwedzi wakanaka kwazvo wakashandiswa kugadzira monograph
Pindura kuna Maria Florence
Lucia Sánchez akadaro
Unogona here kutiudza, Usher anofungei nezve imba yaanogara?
Pindura lucía Sánchez
Zvinokwanisika sei kuti kunyangwe mune yechinyorwa chakadai pakudzidzisa pamusoro pezvinyorwa tinofanira kuona kushomeka kwakapararira kwe "zvishoma" kuchioneka, panzvimbo yeiyo chaiyo "kanenge"? Izvi ndozvazvinotaurwa kana iine chirevo chekuti "zvirinani", "zvirinani", "zvirinani", zvirinani "..." Zvishoma "zvine chirevo chakasiyana uye nekushandisa:" Ini mukuru ndiri , zvishoma ndinogona kutakura zvikanganiso "; "Ukaenderera mberi, ndipo paunotofanira kudzokera kumashure."
Maria Frisa. Mibvunzo gumi yemunyori weNdichengete.
Camilo José Cela. Mhuri yaPascual Duarte mumitsara gumi nemiviri